आईपीएल फाइनल आज :र चेन्नई र हैदरावादमा कसले हात पार्लान उपाधी ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आईपीएल फाइनल आज :र चेन्नई र हैदरावादमा कसले हात पार्लान उपाधी ?
आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १२:१३ मा प्रकाशित !
काठमाडौं, १३ जेठ । इण्डियन प्रियिमर लिग आईपीएल क्रिकेटको उपाधिका लागि आज राति सनराइजर्स हैदरावाद र चेन्नई सुपरकिंग्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । मुम्बइको वाङखाडे रंगशालामा हुने खेल निकै नै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि पहिलो क्वालिफायरमा पनि हैदरावाद र चेन्नईबीच खेल भएको थियो ।
खेलमा चेन्नई विजयी हुँदै फाइनल पुग्दा हैदरावाद दोस्रो क्वालिफायरमा धकेलिएको थियो । समूह चरणमा खेलिएका दुवै खेलमा पनि चेन्नईले हैदरावादलाई हराएको थियो । शुक्रबार हैदरावादले दिएको १ सय ७५ रनको लक्ष्य पछ्याएको कोलकाताले २० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा १ सय ६१ रन मात्र जोड्न सक्यो ।
PREVIOUS POST Previous post: नीति तथा कार्यक्रममाथिको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री (लाइभ भिडियो)
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १२:१३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १२:१३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १२:१३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १२:१३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १२:१३